Mid ka mid ah Click to kaabta iyo Soo Celinta OS iyo Android SMS Labada
Fikradda ah adeeg fariin gaaban ayaa la helo caan ka badan waxa uu ku sameeyey taariikhda ee wada hadalka telefoonka. Waxaa lagu qiyaasaa in 3 qof 5 qof oo SMS ah maalin kasta u dirto qof. Tani waxay kuu sheegaysaa muhiimada ay leedahay SMS ah aduunka maanta aad. Labada su'aasha waxa ay tahay, sida aan gurmad iyo soo celin karo SMS aad ku badelay gaar ahaan xaalado aad u leedahay in laguugu beddelo telefoonada android ama arrimo aan iyaga laga badiyay. Maqaalkani waxa uu u socdo si loo eego tallaabooyinka ka midka ah gurmad iyo soo celiyo ee SMS labada qalabka Android iyo macruufka.
Qeybta 1: kaabta iyo Soo Celinta SMS la Wondershare MobileTrans
Qeybta 2: Talooyin wanaagsan Maareynta SMS on Android iyo macruufka.
Qeybta 1: kaabta iyo Soo Celinta SMS la Wondershare MobileTransTips Better Maareynta SMS on Android iyo macruufka.
Wax macno ah ma haddii aad waxaa lagu casriyeeyo qalab ama la beddelo gebi in qalab kale oo sare silsiladdaa. Wondershare MobileTrans Siiyaa fursad ah u fudud in ay kaa caawiyaan in aad ka soo kabsado farriimo aad u tari jirtay in hal click. Waxaa muhiim ah in halkan lagu xusey in ay ammaan tahay in ay isticmaalaan iyo lahaan lahayn wax khatar adiga ama qalab aad si. Sidoo kale, fariimaha soo celiyay u iman doontaa sida asalka ah si aadan u baahan tahay in laga walwalo ka bedelida.
Marka hore, waxaan ku talineynaa inaad gashato MobileTrans codsiga on your computer.
Download iyo rakib iyada oo xiriir this.
SMS Phone kaabta in Computer ah
Talaabada 1: Riix Back Up Your Phone on Homepage ah inay soo qaadaan Window ee kaabta
Talaabada 3 : bareesada in USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka in kombiyuutarka. Wondershare MobileTrans Ayaa taageeri karaan macruufka iyo qalabka Android iyo isla ogaadaa doono telefoonka iyo shillinta xogta dib kartaa.
Hubi in aad untick oo dhan waxyaalaha kale ee ka tagay fariimaha qoraalka ah oo keliya saxday iyo riix Start Copy. Tani waxay u billaaban doonaan gurmad aad SMS kolkiiba fariimaha oo dhan waxaa lagu taageeray korkiisa MobileTrans ilaa.
Soo Celinta SMS From A File kaabta
Tallaabada 1: Dib u tag ee Soo Celinta ka kaabta on Page Home ah.
Talaabada 2: Riix Soo Celinta ka kaabta si ay u helaan in ay galaan soo celin suuqa kala
Talaabada 3: Isticmaal USB ah in aad telefoonka ku xiran Computer aad
Tallaabo 4: Riix Icon MobileTrans ah
Talaabada 5: Dooro fariimaha qoraalka iyo dooro File ah ee kaabta iyo Riix Start Copy
Tallaabooyinkan waxay soo celin doonaa SMS aad xoojiyaa on MobileTrans in aad telefoon cusub oo dhan haddii ay tahay android ama qalab macruufka ah.
Wax kasta oo xaaladda waxaa laga yaabaa, nooca dhaqanka ee fariimaha qoraalka ama SMS ku Short adeeg fariin ay soo waddo dheer adduunka ee isgaarsiinta. Waxay keeni karto khatar ah in dadka isticmaala sida xusuusta helo buuxa iyo abaabulka SMS dhibaato wayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dooneynaa inaan ku qor qaar ka mid ah talooyin ah ee maaraynta SMS fiican ee aad android ama arrimo aan.
Takhalusid Old Messages toos ah
Tani waa arrin aad u muhiim ah maaraynta SMS in aad casriga ah. Tani waa sababta oo ah haddii aadan si taxaddar leh, xusuusta telefoonka aad ka heli doonaa si buuxda oo suurogal ah in ay ka xanibeen farriimaha soo socda uu noqonayaa mid dhab ah. Halkan ikhtiyaarka ugu fiican waa in ay tirtirto fariimaha jirka si toos ah. Kuwani fariimaha jir ah loo doortay by user casriga ah oo dhigay hab user uu doonayo. Tusaale ahaan, android iyo macruufka leedahay ikhtiyaar ah la tirtiro fariimaha hore si toos ah marka mailkooda ayaa gaadhay heer qaar. Ma aha in aad u noqon mid ka mid ah iyaga la tirtiro mid mid. Waxa aad u baahan tahay in aad halkan ku samaynayno waa la qabsado goobaha aad telefoonka. Tag saldhig oo aad SMS ah ee aad taleefan ka yar goobaha guud. Raadi jir sanduuqa fariin delete oo hubi. Markaas xuduud SMS .Waxaa dhigay kartaa xadka in ay fariimaha qoraalka ah 200 ama ka badan haddii aad sidaa rabto. Tusaale ahaan, haddii aad qarka u saaran xadka 200 SMS, waxa dhaca waa in, sida xasuusta telefoonka aad helo ilaa 200 farriimo, waxa ay si toos ah u tirtirtaa Fariimaha ka weyn in aad telefoon oon ku furin ilaa meel fariin aad. Iyada oo ay taasi, xusuustaada ma noqon karo buuxa ilaa xad ah ee aad la joojiyo ka helaya farriimaha. Isticmaalka Wararka Delivery :
WhatsApp ayaa jeeg double oo soo socda qoraalka u muuqataa markii fariin loo soo diray. Tani waxa ay xaqiijinaysaa in fariin uu soo diray in WhatsApp. Sidee ku saabsan SMS ah? Maareynta wararka bixinta aad aad SMS in aad qalabka android ama macruufka ma aha sidoo kale adag. Just tagaan goobaha app iyo hoos subcategory ee SMS, waxaa jira sanduuqa warbixin gaarsiinta ah, kaliya waxa ay sax. Iyada oo ay taasi, waxaad had iyo jeer ka heli doontaa ogeysiin ah oo fariin aad u direen la helo marka ay qofka kale.
Dejinta Up Response Automatic :
Xaaladaha intooda badan, tani waxaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo codsi xisbiga saddexaad. Mid ka mid ah codsiyada sida waa SMS Auto ah. Waa qalab fiican, taas aawadeed iyo in la soo bixi karaa lacag la'aan ah ka dukaanka Google play. Marka bixi oo lagu rakibay qalabka android aad, waxaad isticmaali kartaa feature auto jawaabta. Tusaale ahaan, marka shir, oo aad kadhawaajin karto muujinta ah si ay u muujiyaan "Waxaan ku jiraa kulan, waxaan idin ka dib wici doonaa". Sidoo kale ogsoonow in hawlgalayo habkaani waa sida fudud sida riixaya iyo marka button in goobaha.
Jadwal u SMS ah:
Waxaa jirta waddo fiican lahayn si ay u maareeyaan SMS diraya tahay isticmaalka fursadaha jadwalka ee qalabka Android iyo macruufka. Tusaale ahaan, aad rabto in aad qof ugu horeeyay ee u doonayo dhalashada soo dir saaxiibkaa, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in ay u balan at 12am aad marka ay hurdaan. Just nooca fariinta, u tag ikhtiyaarka, iyagaa doorta kaltanka iyo talooyin taariikhda iyo waqtiga. Waxaa si toos ah u dirayaa markii wakhtigii la gaaro.
> Resource > macruufka > One Click to kaabta iyo Soo Celinta Labada macruufka iyo Android SMS